Mgbe Harvey gasịrị, na Irma, ugbu a abịa Maria, ajọ ifufe ọzọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Map ikuku ugbu a
Mgbe ajọ ifufe nke Hurricane Irma gafere, ohuru ohuru egwu egwu obere Antilles, na Caribbean. Ajọ Ifufe Maria. A na-atụ anya mmetụta ya na awa ole na ole sochirinụ, na mpaghara a nke mmetụta nke Irma ha na-agbawa obi. María, nke bụ ajọ ifufe mmiri, emeela ka ọ sie ike n'ime awa ndị ikpeazụ ruo mgbe ajọ ifufe nke mbụ na-erute. N'otu aka ahụ, ihe niile na-egosi na nke a Maria ga na ano ike, na ọzọ enwere ọkwa ọzọ na Puerto Rico.
Ihe niile ga-adabere na otu esi agbanwe ma ọ bụrụ na ọ "kpebie" ịgbanwe trajectory ya. N'oge a na-atụ anya na ọ nwere ike ịgafe agwaetiti Puerto Rico, ma na ọ na-eme ya na ụdị dị elu karịa nke ugbu a. Oge ajọ ifufe ahụ agwụbeghị, ọ bụ ya mere na a ka nwere ndị ọhụrụ.
Mkpu na mpaghara na mmetụta Fujiwhara
Ajọ Ifufe Maria, amụma n'ime awa iri asaa na abụọ
Dabere na Nationallọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ajọ Ifufe nke United States, mbata Hurricane Maria na Leeward Islands na Caribbean na-atụ anya n'ehihie Mọnde a. Ha kwukwara na N'ime awa 48 sochirinụ ọ ga-aga n'ihu na-adịwanye fuerte. Enwere ọkwa ịdọ aka na ntị na Guadeloupe, Dominica, Montserrat, Saint Kitts, Nevis na Martinique. N'iburu n'uche na ọtụtụ n'ime ebe ndị a ọ na-aga Irma emetalarịrị, ha na-eme ka ọnọdụ ahụ sie ike karị. N'ime agwaetiti ndị ahụ bụ nke Antigua na Barbuda, ebe panorama adịghị mma.
Enwekwara ajọ ifufe ọzọ nọ na Atlantic, Hurricane José. Ka ọ dị ugbu a, ọ naghị eyi egwu, agbanyeghị, eziokwu ahụ bụ na e nwere ajọ ifufe abụọ dị nso nwere ike ibute ihe a maara dị ka "Fujiwhara mmetụta". Dabere na ihe nlereanya ahụ, amụma ndị ahụ nwere ike ọ gaghị eduga na mmetụta a. Iji ghọta ihe ọ bụ banyere, ọ na-adị ka a ụdị "iju" agba egwú n'etiti ajọ ifufe ha abịaruola onwe ha nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbe Harvey na Irma, na-abịa ugbu a Maria, ajọ ifufe ọzọ